Cunto macaan caafimaad leh - Inaan laga qoomamaynin xabsiga | Bezzia
Macmacaan caafimaad si looga fogaado qoomamo inta lagu jiro xabsiga
Susana godoy | | Caafimaadka
Waxaan sii wadaynaa, hal maalin oo dheeri ah, guryaheena. Ilaalinta nafteena iyo waliba ilaalinta dadka kale. Sidaa darteed, had iyo jeer waxaa jira saacado dhiman maalintii oo dhan. Karinta iyo cunista guud ahaan waxay noqotay mid ka mid ah dhaqamada ugu caansan toddobaadyadii la soo dhaafay. Sidaa darteed, waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaar macmacaan caafimaad leh.
Iyaga oo la jira, looma baahna in laga qoomamo inta lagu jiro xabsiga. Sababtoo ah marka lagu daro haysashada waxyaabo kooban, waxay yihiin xulashooyin yaree ama baabi'i sonkorta. Marka, xaaladdan waxaan isku mashquulineynaa hawlo taxane ah, oo aan si fiican ugu qalmin. Maaddaama ay tahay inaad baxdo oo keliya usbuuciiba hal mar si aad dukaameysiga u sameysid, qor wax kasta oo aad u baahan tahay hana ka maqnaan waxa soo socda.
1 Mac macaan caafimaad leh sida keega shukulaatada
2 Cudurka mooska
4 Kukiyada bilaa sonkorta ah
5 Baay tufaax ah
Mac macaan caafimaad leh sida keega shukulaatada
Ayaa diidi kara a doolshe shukulaato ah? Runtu waxay tahay in sida xaqiiqada ah dad yar gacmaha kor u qaadi karaan si ay u dhahaan maya macmacaan succucc sidan ah. Laakiin waa run kiiskan, waxaan kaliya u baahanahay dhowr maado oo waxaan lahadleynaa inaysan aheyn keeg ay ka buuxaan sonkor iyo waxyaabo kale oo culeys kordhin doona. Baro!
Si loo sameeyo, waa inaan kala saarnaa caddaanka iyo jaallo ah afar ukun. Waxaan ku dhajinaynaa kuwa cad ilaa barta barafka waxaanan xafidnaa jaallo. Dhinaca kale, waxaan dhalaalaynaa 125 garaam oo ah shukulaato aan macaaneyn iyo in kabadan 50% kookaha, ama waxkastoo aad ugu jeceshahay. Markaad dhalaasho waxaan ku qasnaa jaallo oo si fiican ayaan u garaacnaa. Kadib, dhaqdhaqaaqyada daboolan, waxaan ku darnaa ukunta cad. Markaan wax walba si fiican isugu dhafanno, waxaan u qaadnaa foornada waana intaas. Markaad dhameysid oo aad udhowdahay qabow, waxaad sidoo kale sameyn kartaa mousse shukulaato ama waxaad ku qurxin kartaa midho
Sida cuntadii hore, tirada markasta waa la kordhin karaa iyadoo kuxiran hadba dadka wax cunaya. Xaaladdan oo kale, waxaan u baahan doonaa laba muus bislaaday, laba ukun iyo laba qaado oo boorash ah oatmeal oo aad u garaaci doonto si aad u wanaagsan. Isku dar ah waxaa lagu dari doonaa weel, oo aad ku dufan doonto saliid saytuun yar. Hadda waxaa la joogaa waqtigii lagu dari lahaa xoogaa shukulaato ah ama sabiib ama looska aan cusbada lahayn, oo aad aad u jeceshahay aadna u qaaddid foornada.
Waa mid kale oo ka mid ah macmacaanka caafimaadka qaba ee aan sidoo kale ka dooneyno nolosheena. The jiis Waxay ka kooban tahay saldhig buskud ah, oo aan ku sameyn karno buskudka aan sonkorta lahayn iyo qaaddo subag laws ah. Isku darkaas, waxaan ku xirnaa hoosta caaryada. Waxaan ku sameyn doonnaa keega 200 garaam oo jiis faafis fudud iyo 125 garaam oo yogurt dabiici ah. Si fiican isku qas oo ku dar macaaneyd si aad u dhadhamiso iyo sidoo kale seddex go 'oo gelatin ah oo aan uga tagi doonno biyo, ka daadi oo ku shub biyo yar oo kulul. Wax walba waxaan ku ridnay qaboojiyaha waana intaas. Waxaad ku samayn kartaa lakab sare oo leh macaanka aan macaaneyn.
Kukiyada bilaa sonkorta ah
Cunnooyinka buskudku aad bay u tiro badan yihiin. Waxaa jira dhadhan oo dhan, laakiin waxaan dooranay yicibta, taas oo sidoo kale kufiican keega isbuunyada. Xaaladdan oo kale waad isku qasmi doontaa burka yicibta ama yicibta dhulka, qiyaastii 300 garaam oo ay ku jiraan afar ukumood oo cadaan ah, qaado yar oo laga soosaaray vanilj iyo macaanee ay dhadhamiyaan Wax walba si fiican isku qas, samee xoogaa kubbado fidsan (cajiinka waxaad ku dari kartaa lowska ama in yar oo shukulaato ah) oo ku rid foornada illaa inta khafiifka ah laga dhigayo.
Baay tufaax ah
Waa mid kale oo ka mid ah macmacaanka caafimaadka leh laakiin sidoo kale nolosheena. Xaaladdan oo kale, waxaannu doorannaa nooc deg deg ah oo fudud. Si tan loo sameeyo, waa inaan diirnaa oo jarjar nus kiilo oo tufaax ah. Dhinaca kale, waxaan isku dareynaa ukun balaaran yogurt dabiici ah iyo cabirka dhalada yogurt la dhaho, mid kamid ah boorashka. Waxaan si fiican u garaacnay oo ku darnaa shaaha oo ah budada dubista. Mar labaad ayaan isku darnaa oo waxaan ku darnaa qaybo tufaax ah oo aan diyaarinay. Waxaan ku darnaa caaryada dufan leh oo waxaan u qaadnaa foornada, waad awoodi kartaa saydhaa wax yar oo qorfe ah ka hor inta aan la karin. Ka waran fikradahan macmacaanka caafimaadka leh?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Macmacaan caafimaad si looga fogaado qoomamo inta lagu jiro xabsiga
Sidee looga saari karaa ciddiyaha jel guriga
6 buugaag oo ku saabsan deegaanka oo loogu talagalay carruurta